‘Usazozibamba izintambo uNzama’ | IOL Isolezwe
‘Usazozibamba izintambo uNzama’
Isolezwe / 29 August 2012, 12:25pm /
Eugene Nzama head of Durban metro police Picture: S'bonelo Ngcobo
DURBAN:100112 The new Ethekwini City Manager Sibusiso Sithole talk at the press conference held at the Durban City hall. PICTURE:GCINA NDWALANE
IMENENJA kaMasipala waseThekwini uMnuz Sbu Sithole ithi isikhulu samaphoyisa esingafunwa uMnuz Eugene Nzama ngeke siwushiye umsebenzi waso.
USithole ukusho lokhu emhlanganweni weziphathimandla wamasonto onke lapho eveze khona ukuthi okwamanje azikho izizathu ezingadala ukuthi uNzama axoshwe emsebenzini.
“Azikho izisekelo zomthetho ebezingenza ukuthi uNzama simsuse esikhundleni sakhe nokuyinto efunwa ngamaphoyisa. Uzoqhubeka nomsebenzi wakhe kube kusalandelwa imigudu yomthetho efanele,” kusho uSithole.
USithole uphinde wadalula ukuthi ngoDisemba 1 nonyaka bazoqasha ngokugcwele amaphoyisa angu-919 okuthe uma belandela yonke imigudu babona isidingo sokuthi aqashwe ngokugcwele kulo mbutho.
“Kwaba yiphutha likamasipala kwasekuqaleni ukuthi uqashe amaphoyisa ngale ndlela. Leli phutha kumele libe yisifundo sokuthi ingaphinde yenziwe into efana nalena ngomuso ngoba iphethe kabuhlungu ngemibhikisho. Akukuhle ukuqasha iphoyisa libe yitoho ngoba alitholi mihlomulo efana neyozakwabo abaqashwe ngokugcwele,” usho kanje.
Kumenyezelwe nokuthi aseqeqeshwe wonke amaphoyisa aseneminyaka eminingi esebenza kodwa engaqeqeshiwe. Kunxuswe lawo asale ngaphandle kulolu qeqesho ukuba aziveze ukuze nawo aqeqeshwe.
Kusukela ngonyaka odlule amaphoyisa eTheku abehlala ngokuba nemibhikisho enodlame efuna ukuthi akhonjwe indlela umphathi wawo uNzama emsola ngenkohlakalo nokuhluleka wukuhola lo mbutho ngendlela efanele.
NgoJuni uNzama unikwe umhlabakhefu oyisipesheli wezinyanga ezintathu obuzophela ngo-Agasti kodwa wanikela enkantolo yezabaSebenzi kungakapheli ngisho inyanga okuyiyona embuyisele emsebenzini. Lokhu kuthukuthelise amaphoyisa akubeka kwacaca ukuthi uNzama kumele afudukiselwe komunye uMnyango noma ayogada amathuna.
USithole uxwayise lama phoyisa ngokuthi ngeke bakuthathe kancane ukuphulwa kwemithetho yedolobha wathi azovela esigcawini sokuqondisa izigwegwe amaphoyisa aphule imithetho ngokubhikisha.
“Lawo maphoyisa asabisa ngokumisa yonke into eThekwini ngokuvala imigwaqo kuSpagetti Junction, nokuphazamisa ukusebenza kwesi-khumulo sezindiza iKing Shaka, kuzomele aphinde acabangisise ngoba sizofaka amaphoyisa amaningi azoqinisekisa ukuthi akwenzeki lokhu,” kusho uSithole othe abafuni abasebenzi babo babe sezinkampanini ezitholela abantu imisebenzi.